Kitra : tratra nangalatra ny mpilalaon’ny US Ste Marienne - Informations et Actualités sur Madagascar
Sports Kitra : tratra nangalatra ny mpilalaon’ny US Ste Marienne
Kitra : tratra nangalatra ny mpilalaon’ny US Ste Marienne
by Alpha world on 15 h 39 in Sports
Ny talata lasa teo no niverina atsy La Réunion ny ekipan’ny US Ste Marienne, avy niatrika ny lalao famaranana mandroso amin’ny fiadiana ny amboaran’ny ranomasimbe Indianina (UFFOI).
Nisy fahatarana anefa ny fiaramanidina niaingan-dry zareo, noho ny halatra nataon’ny mpilalao
reonioney, tao amin’ny seranam-piaramanidina Ivato. Tratry ny «camera de surveillance» naka ny findain’ny mpiasan’ny seranana, nofahanana tao amin’ny efitrano fiandrasana ny mpilalao roa an’ny US Ste Marienne, izay niray tsikombakomba. Avy hatrany dia nitory ireo mpilalao ireo ilay tompon’ny finday ka teo noho eo ihany, notanana teo anivon’ny mpitandro filaminana misahana ny seranam-piaramanidina izy mirahalahy ireo, ary naiditra «violon», ny talata alina, araka ny tati-baovao. Tsy afaka nandà ny fiampangana azy mihitsy ireto mpilalao ireto, satria hita sy voamarina tao anatin’ny horonantsarin’ilay «caméra» ny zavatra nataony. Araka izany, tsy afa- niara nody tamin’ireo namany ireto mpilalao tratra nangalatra ireto.
Rehefa nisy ny fifanarahana teo amin’ilay tompon’ny finday sy ny tomponandraikitry ny klioba US Ste Marienne, fantatra fa navotsotra izy mirahalahy. Miandry ny fisian’ny sidina mankany La Réunion ireto mpilalaon’ny Ste Marienne, ireto vao afaka miverina any aminy. Raha tsiahivina, niatrika ny lalao famaranana mandroso amin’ny fiadiana ny amboaran’ny ranomasimbe indianina (UFFOI), tany Mahajanga ny US Ste Marienne, ka nisaraka ady sahala 1 noho 1, tamin’ny Cnaps Sport. Ny fihaonana miverina eo amin’ny roa tonta, hatao any La Réunion, ny alahady 3 aogositra izao.
By Alpha world at 15 h 39